China USB ifektri abakhiqizi | SJJ
I-USB isetshenziswa kabanzi empilweni yanamuhla. Kungakuhle ukugcina imininingwane nokudluliswa kolwazi. Esimweni sehhovisi elingenamaphepha, imibhalo phakathi kozakwethu empeleni iyinethiwekhi ye-elektroniki. Kodwa-ke kusazoba nemikhawulo ethile, njengemvelo engajwayelekile, ayikho imvelo yenethiwekhi, amadokhumenti okuphepha aphezulu enkampani, kanye nemvelo yenethiwekhi embi. I-USB isadingeka kakhulu, futhi ingaba isipho esihle kakhulu sebhizinisi nezinto zokuphromotha. I-USB inesikhala esanele sokuphrinta ukukhangisa, ukuthuthukisa isithombe somkhiqizo. Ngokungeziwe ngaphandle kwe-USB LOGO, i-chip ingaqiniswa izinkampani zokukhangisa amafayela (ividiyo, amadokhumende, izithombe, njll.) Idlala ngokuzenzakalela izinsizakalo ezengezwe ngenani, isikhathi sempilo se-USB yinde, yenza ukukhangisa iminyaka eminingi, uma sekuqalisiwe, umkhiqizo umphumela wokukhangisa unomphela. Umphumela wesikhangiso ungcono kunezinye izinto zokuphromotha ezilula. Ikakhulukazi ikhava yempahla ebonakalayo enhlobonhlobo, ikhava yensimbi enhle, ikhava enhle ye-PVC / abicah lokhu kungaletha imizwa ehlukile kubamukeli.
Izinto zokwakha: Insimbi, i-PVC ethambile, abicah, isikhumba + insimbi, i-ABS, i-acrylic, ukhuni.
Idizayini: Sinezitayela eziningi ezikhona ongakhetha kuzo. Futhi kungenziwa egcizelele design nokuma.
Inqubo ye-logo: Ukuphrinta kwe-Silkscreen, ukuphrinta okungu-offset, i-laser.
Iphakheji: Ibhokisi lephepha, isikhwama se-velvet, isikhwama se-foil.
Langaphambilini Ama-Poker Chips
Olandelayo: Iziphathi Zesiphuzo se-Neoprene
Ama-USB Flash Disks
Ama-USB Flash Drives
Imemori ye-USB Flash
Ibhande le-USB Silicone Slap